Ny mpijirika Julian Assange voasambotra tao London | Apg29
Ny mpijirika Julian Assange voasambotra tao London
Justice fotoana hamita fanaovana. Ny mpijirika sy ny Wikilleaks Julian Assange mpanorina efa voasambotra tao London ny polisy britanika nanomboka teo Ekoatera miaro ny fialokalofana ara-politika.
Julian Assange manana nandritra ny fito taona efa nipetraka tany amin'ny masoivoho Ekoateriana ao Londona satria nomena fialokalofana ao amin'ny firenena tamin'ny 2012.
Ny fisamborana dia nofy ratsy ho Assange, izay azo ankehitriny no sisa ho an'ny United States. Ao Etazonia, dia ahiahiana ny heloka bevava ny hizara antontan-taratasy tsiambaratelo.
Nampangaina ho fanolanana tany Soeda
Julian Assange voampanga ho fanolanana any Soeda, fa ny fanadihadiana dia nakatona tamin'ny 2017.
Expressen manoratra hoe:
Tamin'ny 2010 fa Julian Assange dia nosamborina tsy natrehiny noho ny Anarana fitsarana noho ny fiahiahiana ho fanolanana.
Izy efa tany Soeda mba hanome lahateny, anisan'izany LO trano mimanda ao Stockholm ny foto-kevitry ny "voalohany niharam-boina ny ady no fahamarinana." Mifandray amin'ny fitsidihana an'i Soeda dia nilaza Assange ny fanolanana sy ny herisetra ara-nofo ny vehivavy roa, zavatra izay Express no voalohany asehon'ny.
Assange nandà ny fiampangana azy, fa tsy nety hiseho-bavany, satria natahotra fa Soeda dia hanolotra azy eo an-United States. Tamin'ny Desambra 2010 dia nosamborin'ny polisy britanika fa ny fitsarana nanapa-kevitra ny hamoaka azy ho any amin'ny fandoavana onitra.
Ny volana Jona, roa taona tatỳ aoriana, dia nangataka fialokalofana ara-politika ao amin'ny masoivohon'i Ekoatera ao Londres - izay efa nipetraka hatramin'ny.
Jesosy mametraka ny olona maimaim-poana
Ny zavatra tsara indrindra izao dia ny WikiLeaks Julian Assange mpanorina nandositra an'i Jesosy. Ny masoivoho dia tsy miasa. Kosa, dia efa ho am-ponja noho ny mpamorona, fa Jesosy mametraka ny olona maimaim-poana!
Vecka 30, onsdag 24 juli 2019 kl. 11:03